FAMERENANA AMIN’NY LAONINY NY VIDIN-TSOLIKA : Fidirana an-tsehatra ara-politika no nataon’ny fanjakana
Raha tsiahivina dia nahitana fiakarany hatrany amin’ny 90 Ariary ny iray litatra amin’ny gazoala, 95 Ariary kosa ho an’ny lasantsy ary manodidina ny 40 Ariary ny solika fandrehitra. 5 avril 2018
Ny faran’ny volana marsa, izany hoe nitsena ny fahatongavan’ny volana avrily sy ny fankalazana ny fetin’ny paka io fiakarana tampoka tsy nampoizin’ny rehetra io. Tafiakatra hatrany amin’ny 4000 Ariary mahery ny iray litatra amin’ny lasantsy tamin’izany. Tsikaritra anefa andro vitsy taorian’io dia nisy ny fepetra kely hany mba noraisin’ny fanjakana ka nitazonana ny vidin’ny solika eny amin’ireo mpaninjara ho toy ny teo aloha ihany.
Nambaran’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta fa nisy ny fifampiresahana an-databatra boribory niarahana tamin’ireo tompon’andraikitra misehatra amin’ny fandraharahana ny solika ka nahitana ny marimaritra iraisana mba tsy hisian’ny fipoahana ara-tsosialy. Ankilany kosa anefa ny mpahay toekarena, Razafimahova Serge izay nilaza fa fidirana an-tsehatra ara-politika no nataon’ny fanjakana tamin’ny fampidinana an’io vidin-tsolika io.
Araka ny fanazavana noentiny hatrany dia tsy tokony hihoatra ny 4000 Ariary ny iray litatra amin’ny vidin-tsolika ka mba hanehoana fa mitsinjo ny vahoaka ny fitondrana dia tsy maintsy nampidinina izany. Voalazany ihany koa fa mahagaga ihany ny fihetsiky ny fitondram-panjakana izay afaka manao fidirana an-tsehatra tahaka izao kanefa tsy nanao izany hatramin’izay.